ရယ်လိုက်ရင်အရမ်းချစ်စရာကောင်းသူလေး…Happy Birthday ပါ – Trend.com.mm
ရယ်လိုက်ရင်အရမ်းချစ်စရာကောင်းသူလေး…Happy Birthday ပါ
Posted on April 30, 2018 April 30, 2018 by Noel
ဟဲလို… Wonder Woman ပရိသတ်တွေရှိကြလား? ဒီကနေ့ကတော့ Wonder Woman မင်းသမီးချောလေး Gal Gadot ရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ၁၉၈၅ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ အသက် ၃၃နှစ်ရှိပါပြီ။ အစ္စရေးမော်ဒယ်လ် မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမဟာ အစ္စရေးစစ်တပ်မှာလည်း ၂နှစ်ကြာအောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အနုပညာလောကထဲမ၀င်ခင်တုန်းက သူမဟာ IDC Herzliya ကောလိပ်မှာပညာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
Gal Gadot ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ The Fast and the Furious ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ သူမဟာ Gisele Yasharအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီတုန်းကပရိသတ်တွေကသူမကိုသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဘယ်အချိန်မှာသတိထားမိခဲ့တာလဲဆိုတာတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ DC ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Wonder Woman ဇာတ်ကားနဲ့ အထူးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Justice League မှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၈မှာတော့ Time ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ချက်အရ ကမ္ဘာ့အလွှမ်းမိုးနိုင် ဆုံးသော လူအယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ Gal Gadot လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မိသားစုဘ၀လေးကလည်း ပျော်စရာပါပဲ။သူမရဲ့ အမျိုးသား Yaron Varsano နဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သမီးလေး၂ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပရိသတ်တွေအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းကတော့ Wonder Woman2ဟာ ၂၀၁၉မှာထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းပြီး ချိုမြိန်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ Gal Gadot ဟာ လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာလည်း မမ မမဆိုပြီးရေပန်းစားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါ။ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေတင်မက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါ သိပ်ချစ်ကြတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
Happy Birthday ပါ…
ဟဲလို… Wonder Woman ပရိသတျတှရှေိကွလား? ဒီကနကေ့တော့ Wonder Woman မငျးသမီးခြောလေး Gal Gadot ရဲ့ မှေးနလေ့ေးပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကို ၁၉၈၅ခုနှဈ ဧပွီ ၃ဝရကျနမှေ့ာမှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျတော့ အသကျ ၃၃နှဈရှိပါပွီ။ အစ်စရေးမျောဒယျလျ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပွီးသူမဟာ အစ်စရေးစဈတပျမှာလညျး ၂နှဈကွာအောငျ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ဖူးပါတယျ။အနုပညာလောကထဲမဝငျခငျတုနျးက သူမဟာ IDC Herzliya ကောလိပျမှာပညာသငျကွားခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
Gal Gadot ရဲ့ ပထမဆုံးရုပျရှငျကတော့ The Fast and the Furious ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီဇာတျကားမှာ သူမဟာ Gisele Yasharအဖွဈသရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပွီး အဲ့ဒီတုနျးကပရိသတျတှကေသူမကိုသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဘယျအခြိနျမှာသတိထားမိခဲ့တာလဲဆိုတာတော့ပွောစရာလိုမယျမထငျပါဘူး။၂၀၁ရခုနှဈမှာ DC ကရိုကျကူးခဲ့တဲ့ Wonder Woman ဇာတျကားနဲ့ အထူးအောငျမွငျမှုရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျ Justice League မှာလညျးပါဝငျခဲ့ပါတယျ။၂၀၁၈မှာတော့ Time ရဲ့ စဈတမျးကောကျခကျြအရ ကမ်ဘာ့အလှမျးမိုးနိုငျ ဆုံးသော လူအယောကျ ၁၀၀ စာရငျးမှာ Gal Gadot လညျးပါဝငျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
မိသားစုဘဝလေးကလညျး ပြျောစရာပါပဲ။သူမရဲ့ အမြိုးသား Yaron Varsano နဲ့ ၂၀၀၈ခုနှဈကလကျထပျခဲ့တာဖွဈပွီး သမီးလေး၂ယောကျရှိပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ပရိသတျတှအေတှကျဝမျးသာစရာသတငျးကတော့ Wonder Woman2ဟာ ၂၀၁၉မှာထှကျရှိလာတော့မှာဖွဈပါတယျ။သရုပျဆောငျလညျးကောငျးပွီး ခြိုမွိနျတဲ့အပွုံးလေးနဲ့ဖမျးစားနိုငျတဲ့ Gal Gadot ဟာ လူငယျပရိသတျတှကွေားမှာလညျး မမ မမဆိုပွီးရပေနျးစားတဲ့အထိဖွဈခဲ့တာပါ။ယောကျြားလေးပရိသတျတှတေငျမက မိနျးကလေးပရိသတျတှကေပါ သိပျခဈြကွတဲ့မငျးသမီးတဈလကျလညျးဖွဈပါသေးတယျ။
နန်းတွင်းဇာတ်ကားအသစ်မှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်….